7 युरोप मा Pickpockets बाट बच्न को लागी सुझाव | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा सुझाव >7युरोप मा Pickpockets बाट बच्न को लागी सुझाव
प्राचीन रोमान्टिक शहरहरू, आकर्षक बगैंचा, सुन्दर वर्गहरू, यूरोप को लागी हरेक दिन लाखौं पर्यटकहरु लाई आकर्षित गर्नुहोस्. संसार भर बाट यात्रीहरु यूरोप भ्रमण यसको इतिहास र आकर्षण को अन्वेषण गर्न को लागी र आफैलाई प्रसिद्ध युरोपेली स्थलहरु मा स्मार्ट चाल द्वारा पिकपेटेड पाउन।. युरोप मा pickpockets बाट बच्न को लागी यी सुझावहरु को पालन गरेर तपाइँको अद्भुत यात्रा को दौरान सुरक्षित रहनुहोस्.
1. Pickpockets बाट बच्न को लागी सुझाव: खतरनाक क्षेत्रहरु जान्नुहोस्
जान्नुहोस् जहाँ तपाइँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाइँको जीवन को सबै भन्दा राम्रो समय भएको मा एक ठूलो हिस्सा खेल्छ. त्यसैले, जब तपाइँ इटाली वा फ्रान्स मा तपाइँको छुट्टी को योजना बनाइरहनुभएको छ, तपाइँले हेर्नु पर्ने ठाउँहरु साथै खतरनाक स्थलहरु को अनुसन्धान गर्नु पर्छ. त्यहाँ चिन्ता गर्न को लागी कुनै कारण छैन, तपाइँ आफैंलाई एक गिरोह युद्ध मा पाउनुहुन्न, तर प्रत्येक गन्तव्य संवेदनशील स्थानहरु छन्, जहाँ पर्यटकहरूले आफ्नो सामानहरूमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ र पकेट पकेटहरूबाट हेर्नुपर्छ.
साधारणतया, ठाउँहरु मा तपाइँ सावधान रहनु पर्छ, पिस्सा बजार जस्तै ठाउँहरु छन्, व्यस्त लोकप्रिय वर्गहरु, र सार्वजनिक यातायात स्थलहरू. के यी सबै ठाउँहरु साझा साझा छ कि उनीहरु धेरै भीड छन्, त्यसैले जब तपाइँ एफिल टावर वा मिलान कैथेड्रल मा हेर्दै हुनुहुन्छ, pickpockets सजीलै तपाइँ मा टक्कर गर्न सक्नुहुन्छ, र सेकेन्ड भित्र तपाइँको वालेट गयो. तपाइँको वरपर र भीड को बारे मा सचेत हुनुको लागी यूरोप मा पिकपेटहरु बाट बच्न को लागी एक शीर्ष टिप हो.
2. अनुसन्धान Pickpocketing चाल र घोटाला
सुन्दर अपरिचित वा टक्कर मा चाल छ2युरोप मा सबै भन्दा साधारण पिकपॉकेटिams घोटाला को. बस जस्तै यूरोप मा हरेक शहर यसको जादू र लुभावनी स्थलचिन्ह छ, विशेषता pickpocketing चालहरु संग एकै. त्यसैले, यदि तपाइँ तपाइँको बहुमूल्य सामान राख्न चाहानुहुन्छ, तपाईंको गन्तव्यमा सामान्य पिकपकेटिङ घोटालाहरूको लागि अग्रिम अनुसन्धान गर्नुहोस्.
पिकपॉकेटि sc घोटाला को लागी अतिरिक्त उदाहरण समय वा दिशाहरु को लागी सोध्ने सुन्दर अजनबी हुन्. जब तपाइँ तपाइँको नक्शा जाँच गर्दै हुनुहुन्छ, वा हेर्नुहोस्, तिनीहरू नजिक आउँछन् र तपाईंको खल्ती वा झोलामा भएको कुनै पनि चीज समात्छन्. त्यसैले, सतर्क रहनुहोस् र कुनै एकको लागि नपर्नुहोस् 12 विश्व मा प्रमुख यात्रा घोटाला.
पेरिस देखि लन्डन एक ट्रेन संग
3. Pickpockets बाट बच्न को लागी सुझाव: होटलमा बहुमूल्य सामानहरू छोड्नुहोस्
पासपोर्ट छोडेर, क्रेडिट कार्डहरु, र होटल सुरक्षित मा गहना यूरोप मा pickpockets बाट बच्न को लागी शीर्ष सुझावहरु मध्ये एक हो. अघि उल्लेख रूपमा, pickpockets बिल्कुल जान्न को लागी जहाँ पर्यटकहरु लाई ध्यान दिएर बिना बहुमूल्य बस्तुहरु पाउन को लागी एक प्रतिभा छ. यसबाहेक, आज जब तपाईं आफ्नो इमेल वा फोन मा आफ्नो राहदानी को एक प्रतिलिपि पाउन सक्नुहुन्छ, वा अनलाइन दर्शनीय स्थलहरु टिकट बुक, त्यहाँ तपाइँको सबै नगद वा क्रेडिट कार्ड बोक्न को लागी कुनै कारण छैन.
त्यसैले, तपाइँ एक मा घुम्न जानु भन्दा पहिले छोड्नुहोस् युरोप मा सबै भन्दा राम्रो पिस्सू बजार, केही नगद मात्र लिनुहोस्. त्यहाँ तपाइँको सबै क्रेडिट कार्ड बोक्ने कुनै कारण छैन, तर यदि तपाईं जिद्दी गर्नुहुन्छ, विभिन्न भित्री जेबहरूमा नगद र कार्डहरू फैलाउनुहोस् वा पैसा बेल्ट.
4. भित्री जेबहरूमा आवश्यक मूल्यवान वस्तुहरू राख्नुहोस्
गर्मी को दिन मा पैसा बेल्ट वा भित्री ज्याकेट जेब एक महान तरीका हो तपाइँको कीमती सामान सुरक्षित राख्न को लागी. यो यात्रा चाल गर्न को लागी सजिलो छ जब तपाइँ तहहरु लगाउनुहुन्छ, पतन वा जाडो को समयमा र असहज हुन सक्छ जब मौसम तातो र आर्द्र छ.
तपाईं घरमा वा यात्राको समयमा कुनै पनि यात्रा वा स्मारिका पसलमा पैसा बेल्टहरू किन्न सक्नुहुन्छ, उदाहरण को लागी केन्द्रीय रेल स्टेशनहरु वा एयरपोर्टहरुमा. भित्री जेबहरुमा चीजहरु राख्नु को लाभ स्पष्ट छ, pickpocketers तपाइँ मा टक्कर हुन सक्छ, तर तपाइँको जीन्स जेब भन्दा बाहिर सम्म पुग्न को लागी प्रबन्ध गर्दैन. यो बाटो, तपाईं खुसीसाथ वरिपरि घुम्न र युरोपमा अद्भुत स्थलचिन्हहरू अन्वेषण गर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ.
5. एक क्रस-शरीर झोला ल्याउनुहोस्, ब्याकप्याक होइन
जब आकर्षक यूरोपीयन गल्लीहरु भटक, वा Louvre को लाइन मा उभिनु तपाईं सहज हुनुपर्छ. आरामदायी जुत्ता लगाउनु यात्रा गर्दा क्रस-बडी झोला जत्तिकै आवश्यक छ. एक क्रस शरीर झोला चिन्ता रहित यात्रा को मतलब, भिडभाडको लाइनमा कोही तपाईंमाथि घुमिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि तपाईंले काँधमा हेरिरहनु पर्दैन।.
यसबाहेक, तपाइँ मात्र क्रस-शरीर झोला बाट पानी को बोतल वा वालेट हान्न सक्नुहुन्छ. त्यसैले, एक क्रस-शरीर झोला ल्याउने यूरोप मा pickpocketing बाट बच्न को लागी आदर्श हो, साथै सजिलै र सहज रूपमा दर्शनीय स्थलहरू.
6. Pickpockets बाट बच्न को लागी सुझाव: पोशाक र एक स्थानीय जस्तै कार्य
एक पर्यटकलाई विशेषज्ञ पिकपकेटमा दिने चीजहरू मध्ये एक धेरै अनौंठो पर्यटन फेसन हो: पाउचहरु, खेलकुद लुगा, र एक पर्यटक जस्तै अभिनय. गिरजाघरहरु, प्राचीन वर्गहरु, र यूरोप मा धेरै स्थलचिन्हहरु धेरै लुकाउने छन् कि पर्यटकहरु प्राय: रोकिन्छन् र मात्र हेर्छन्, वा सयौं तस्वीरहरु लिनुहोस्.
सबैभन्दा राम्रो टिप यूरोप मा pickpocketing बाट बच्न को लागी स्थानीय भीड संग मिश्रण गर्न को लागी हो. त्यसैले, बस जस्तै तपाइँ आफ्नो यात्रा गन्तव्य मा भ्रमण गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो स्थानहरु को अगाडि जाँच गर्नुहोस्, स्थानीय प्रवृत्ति र संस्कृति जाँच गर्नुहोस्.
7. Pickpockets बाट बच्न को लागी सुझाव: यात्रा बीमा छ
यात्रा बीमा प्राप्त गर्दै यात्रा गर्नु अघि आवश्यक छ. आज तपाइँ आफ्नो बहुमूल्य सामान र सामान बीमा गरीएको हुन सक्छ, मात्र यदि यो हराएको छ वा यस मामला मा, चोरी भएको. यदि तपाईंको वालेट र कार्डहरू चोरी भएमा यात्रा बीमा जीवन बचाउन सक्छ, बचाउन कोही नआउने बिदेशमा.
निश्कर्षमा, यात्रा संस्कृतिहरु को अन्वेषण गर्न को लागी एक महान तरीका हो, देशहरु र आश्चर्यजनक दृश्यहरु को खोज. धेरै यात्रा अनुभवहरु अचम्मका छन् र यो धेरै दुर्लभ छ कि पर्यटकहरु युरोप मा पिकपॉकेटि encounter्ग मुठभेड. तथापि, यो सधैं राम्रो संग तयार रहन र सावधानी अपनाउन को लागी हो, कसरी यूरोप मा पिकपॉकेटि avoid बाट बच्न को लागी हाम्रो सुझावहरु लाई पछ्याउन जस्तै.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई रेलबाट युरोपको कुनै पनि गन्तव्यमा सुरक्षित र अविस्मरणीय छुट्टीको योजना बनाउन मद्दत गर्न पाउँदा खुसी हुनेछौं।.
के तपाइँ हाम्रो ब्लग पोस्ट "युरोपेह मा Pickpockets बाट बच्न को लागी सुझाव" तपाइँको साइट मा एम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-avoid-pickpockets-europe%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)